China eshibhile Yemabula Yemvelo Iketshe Lokwakhiwa Kwensika Yefektri abakhiqizi I-DFL
Uhlelo Olungabizi kakhulu LweMabula Yemvelo
Imodeli No.: DFL-JBPB
Ukwelashwa Kwaphezulu: Split
Okubalulekile: Imabula ye-Beige
Ukumelana Nokuguguleka Kwamasilayiti: I-Antacid
Ubukhulu: 1 ~ 2cm
Kwenziwe ngentando: Kwenziwe ngentando
Imodeli No .:I-DFL-JBPB
Ukumelana Nokuguguleka Kwamasilayiti:I-Antacid
Okubalulekile: I-Beige Marble
Usayizi:15 * 60cm; 15.2 * 61cm
Ukupakisha:7pcs / ibhokisi, 48boxs / ikesi
1, Yini ubuncane be-oda elincane?
—Akulinganiselwe. Ngokokuqala ngqa, ungakhetha izitayela ezahlukahlukene zokubhala isitsha esisodwa.
2, Yisiphi isikhathi sokulethwa?
Ngokuvamile, kuzoba yizinsuku eziyi-15 okokuqala ukubambisana kwesitsha esisodwa.
3, Yimiphi imigomo yokukhokha esingayamukela?
Kuzoba yi-T / T noma i-L / C okokuqala ngqa. Uma uyinkampani yeqembu futhi unesidingo esikhethekile semigomo yokukhokha, singaxoxa ndawonye.
Inani eliyinhloko lenkampani: Ukuhlwanyela imbewu yeKarma enhle
Inothile wokuthungwa nombala ongeza umuzwa wobukhazikhazi obungaphelelwa isikhathi kunoma iyiphi indawo yangaphakathi noma yangaphandle yokuhlala. Ukuqinisekisa ukuqina nokusebenza okuhlukahlukene, imikhiqizo yamatshe yemvelo ingasetshenziselwa ukudala ukubukeka okuhlanganisiwe kwesitayela esihlala njalo. I-DFLstoneAmaphaneli Amatshe unamathele kulezi zici ezilandelayo:
I-DFLstone Ama-Ledgestone Panels zenziwe ngamatshe emvelo ayi-100% futhi zakha ubukhulu obuthathu Itshe Elihlanganisiwe ukubukeka okuhle.
Ufuna umakhi nomhlinzeki wamatshe afanelekile wemvelo? Sinezinketho eziningi ngamanani amahle ukukusiza ukuthi ube nobuciko. Zonke i-Natural Marble Stone Paneling zinekhwalithi eqinisekisiwe. Siyi-China Origin Factory yoHlelo Olumisiwe Lwe-Paneling System. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Sisebenzisa imishini yokukhiqiza esezingeni eliphezulu nobuchwepheshe, nemishini yokuhlola ephelele nezindlela zokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo wethu. Ngamathalente ethu asezingeni eliphakeme, ukuphathwa kwesayensi, amaqembu amahle kakhulu, kanye nensizakalo yokulalelisisa, imikhiqizo yethu iyathandwa ngamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe. Ngosizo lwakho, sizokwakha ikusasa elingcono!
Amathayili kaMose Black Black Stone kaMoses Wangaphakathi Wodonga
Iphaneli ye-3D Yemvelo Ethandwayo Yemvelo Yodonga Olungaphakathi
Amasistimu Amatshe Ahlelekile Emvelo Okuphuma ...
IGrean Yemvelo Ebekiwe Ledgerstone Hlobisa Outs ...